अप्रिल २९ मा छुद्रग्रह पृथ्वीमा ठोक्किने विभिन्न प्रकारका हल्लाहरु त सुन्नुभएको होला । तर यो हल्ला झुठो हो ।
सत्य के हो भने अप्रिल २९ मा एउटा छुद्रग्रह पृथ्वीभन्दा ४ मिलियन माइल परबाट जान लागेको छ । र, यो अहिले पृथ्वीमा ठोक्किने कुनै सम्भावना नभएको खगोलविदहरुले जनाएका छन् ।
अन्तरीक्षबारे चासो राख्नेहरुका लागि यो परिघटना रोचक परिघटना नै हो । किनभने यो छुद्रग्रह बुर्ज खलिफा भवनभन्दा पाँचगुणा ठूलो छ । यदि यो पृथ्वीमा ठोक्किएमा ठूलो विनाश पनि हुनसक्छ । तर ठोक्किने सम्भावना भने छैन ।
Asteroid 1998 OR2 poses no threat to our planet, but we can still learnalot by studying it. Don’t missaspecial #planetarydefense episode of NASA Science Live this Mon. 4/27 at 3PM EDT to learn about what #asteroids and near-Earth Objects can teach us: https://t.co/tMoV2wwS6g pic.twitter.com/1Ej1roN9mn
नासाले छुद्रग्रह पृथ्वीको नजिक भएर जाँदा हुनसक्ने खतराबारे नजिकबाट अवलोकन गरिरहेको जनाएको छ । जब पृथ्वीको नजिकमा कुनै बस्तुहरु देखिन्छन्, तब नासाले त्यो कतातिर गइरहेको छ, कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन र अवलोकन गरिरहेको हुन्छ ।
अप्रिल २९ मा पृथ्वीको ४ मिलियन माइल नजिक भएर जाने छुद्रग्रह सन् १९९८ मा पत्ता लागेको थियो । त्यसैले यो छुद्रग्रह अचानक प्रकट भएको पनि होइन । नासाले यसको दुईदशकदेखि अवलोकन गरिरहेको छ । पृथ्वीको नजिक भएर जाँदा यसको गति २० हजार माइल प्रतिघण्टा हुनेछ ।
तर यसको दुरी पृथ्वी र चन्द्रमाको तुलनामा पनि १६ गुणा टाढा रहेको छ । अर्थात् पृथ्वीको जुन दुरीमा चन्द्रमा रहेको छ, त्यो भन्दा १६ गुणा परबाट यो छुद्रग्रह जानेछ ।